ch9တမန်တော်ဝတ္ထု – 2ငါးကို
မူလစာမျက်နှာ / သမ်မာကမျြး / တမန်တော်၏တမန်တော် / ch9တမန်တော်ဝတ္ထု
9:2 and he petitioned him for letters to the synagogues in Damascus, သောကြောင့်, if he found any men or women belonging to this Way, he could lead them as prisoners to Jerusalem.
9:3 And as he made the journey, it happened that he was approaching Damascus. နှင့်ရုတ်တရက်,alight from heaven shone around him.
9:4 And falling to the ground, he heardavoice saying to him, "ရှောလု, ရှောလုသည်, why are you persecuting me?"
9:5 နှင့်ဟုသူကဆိုသည်, "မင်းဘယ်သူလဲ, သခင်ဘုရားသည်?” And he: “I am Jesus, whom you are persecuting. It is hard for you to kick against the goad.”
9:6 ထိုမင်းသည်, trembling and astonished, ကပြောပါတယ်, "သခင်, what do you want me to do?"
9:7 ထိုအခါသခင်အားဆို၏, “Rise up and go into the city, and there you will be told what you ought to do.” Now the men who were accompanying him were standing stupefied, hearing indeedavoice, but seeing no one.
9:9 ထိုအရပျ၌, he was without sight for three days, and he neither ate nor drank.
9:10 Now there wasacertain disciple at Damascus, named Ananias. And the Lord said to him inavision, “Ananias!"ထိုအခါသူကပြောသည်, "ငါဒီမှာ, သခင်ဘုရား။ "
9:11 ထိုအခါသခင်အားဆို၏: “Rise up and go into the street that is called Straight, နှင့်ရှာအံ့သောငှါ, in the house of Judas, the one named Saul of Tarsus. ကှ္ဂျကှ္ဂျများအတွက်, he is praying.”
9:13 But Ananias responded: "သခင်, I have heard from many about this man, how much harm he has done to your saints in Jerusalem.
9:15 Then the Lord said to him: "Go ကို, for this one is an instrument chosen by me to convey my name before nations and kings and the sons of Israel.
9:17 And Ananias departed. And he entered the house. And laying his hands upon him, ဟုသူကပြောသည်: “Brother Saul, the Lord Jesus, he who appeared to you on the way by which you arrived, sent me so that you would receive your sight and be filled with the Holy Spirit.”
9:18 ထိုခဏ, it was as if scales had fallen from his eyes, and he received his sight. ထ, he was baptized.
9:19 And when he had takenameal, သူကကိုခိုင်ခံ့စေခဲ့သည်. Now he was with the disciples who were at Damascus for some days.
9:21 And all who heard him were astonished, ထိုသူတို့ကပြောပါတယ်, “Is this not the one who, ယေရုရှလင်မြို့၌, was fighting against those invoking this name, and who came here for this: so that he might lead them away to the leaders of the priests?"
9:24 But their treachery became known to Saul. Now they were also watching the gates, နေ့နဲ့ည, so that they might put him to death.
9:26 ထိုမင်းသည်ယေရုရှလင်မြို့၌ရောက်ရှိသောအခါ, သူသည်တပည့်သည်ကိုယ်တော်တိုင် join ဖို့ကြိုးစားခဲ့. ထိုသူအပေါင်းတို့သည်အထံတော်၌ကွောကျကွ၏, သူကတပည့်ခဲ့ကြောင်းမယုံကြည်ခြင်း.
9:27 သို့သော်ဗာနဗကိုဘေးဖယ်သူ့ကို ယူ. တမန်တော်ဖို့သူ့ကိုဦးဆောင်. ထိုမင်းသည်ထာဝရဘုရား၏လက်တော်မြင်ဘူးဘယ်လိုသူတို့ကိုရှင်းပြခဲ့, သူကသူ့ကိုရန်ပြောပြီခဲ့ကွောငျး, နှင့်မည်သို့, ဒမာသက်မြို့၌, သူသညျယရှေု၏နာမ၌သစ္စာရှိရှိပြုမူခဲ့.
9:28 ထိုမင်းသည်သူတို့နှင့်အတူခဲ့သည်, ဂျေရုဆလင်ဝင်ရောက်နှင့်ထွက်ခွာ, နှင့်သခင်၏နာမ၌သစ္စာရှိရှိသရုပ်ဆောင်.
9:29 သူလည်းတပါးအမြိုးသားနှင့်အတူစကားပြောနှင့်ဟေလသလူနှင့်ငြင်းခုံခဲ့ပါတယ်. ဒါပေမဲ့သူတို့ကသူ့ကိုသတ်ပစ်ရန်ရှာကြ၏.
9:30 ထိုအခါကညီအစ်ကိုတွေကဒီသဘောပေါက်ပြီးမှ, သူတို့ကဲသရိထံသို့ဆောင်ခဲ့ကြ၏နှင့်တာရှုမွို့မှလွှတ်လိုက်ကြ၏.
9:31 မုချ, အသင်းတော်သည်ယုဒနှင့်ဂါလိလဲပြည်နှင့်ရှမာရိလူအပေါင်းတို့လျှောက်လုံးငြိမ်းချမ်းရေးခဲ့, ထိုသို့ဖွင့် built ခံရခဲ့သည်, သခင်ဘုရားကိုကြောက်ရွံ့ခြင်း၌လမ်းလျှောက်စဉ်, ထိုသို့သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်၏သက်သာခြင်းနှင့်ပြည့်စုံလျက်ရှိခဲ့သည်.
9:37 ထိုအကြောင့်ဖြစ်ပျက်, ထိုနေ့ရက်ကာလ၌, she became ill and died. And when they had washed her, they laid her in an upper room.
9:39 ထိုအခါပေတရု, မြင့်တက်တက်, went with them. ထိုမင်းသည်ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးမှ, they led him to an upper room. And all the widows were standing around him, weeping and showing him the tunics and garments that Dorcas had made for them.
9:40 And when they had all been sent outside, ပတေရုသ, ချဒူးထောက်, prayed. And turning to the body, ဟုသူကပြောသည်: “Tabitha, arise.” And she opened her eyes and, upon seeing Peter, sat up again.